अझै सुध्रिएनन् कम्युनिस्ट मन्त्री भानुभक्त ढकाल, जनतालाई कोरोनाबारे दिनभर यसरी ढाँटे !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
अझै सुध्रिएनन् कम्युनिस्ट मन्त्री भानुभक्त ढकाल, जनतालाई कोरोनाबारे दिनभर यसरी ढाँटे !
काठमाडौं – कम्युनिस्ट सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले दिनभर जनतालाई ढाँटेको खुलासा भएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसका तेस्रो संक्रमण व्यक्ति भेटिएपछि मन्त्री ढकालले ती व्यक्ति कतारबाट आएका दाबी गरेका थिए । तर साँझसम्म मन्त्री ढकालले दाबी गलत सावित भएको छ ।
बुधबार मन्त्रालयबाट भिडियोमार्फत जानकारी दिँदै मन्त्री ढकालले चैत्र ६ गते कतारबाट आएका युवामा कोरोना संक्रमण देखिएको सार्वजनिक गरेका थिए । तर मन्त्रीको भनाइ गलत भएपछि मन्त्रालयले तथ्य सच्याएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ती संक्रमित व्यक्ति कतारबाट नभई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट नेपाल आएका थिए ।
बुधवार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती व्यक्ति एयर अरेबियाबाट काठमाडौं आएको जानकारी दिँदै मन्त्री ढकालले बोलेको तथ्य गलत प्रमाणित गरेको छ । एयर अरेबियाको फ्लाइट नम्बर जी ३५३७ बाट ती व्यक्ति चैत ६ गते राति १० बजे काठमाडौं ओर्लिएका थिए ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, ‘सबैको जानकारीका लागि – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का तेस्रो संक्रमित व्यक्ति मार्च १९ (चैत ६) गते एयर अरेबियाको फ्लाइट नम्बर जी ९५३७ बाट राति १०ः९ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।’